Hospital zidumbu lwaseBerlin
Bed zelinen Hospital
Nomonde kunye maternity Wear
Flame Standards Retardancy
Amalaphu ezisetyenziswa ezininzi izithuba zikarhulumente (kubandakanya izibhedlele, kumakhaya abantu abalupheleyo, izikolo, iicawe, iiholo, iiholo, yaye ngakumbi.) Kufuneka ukuba njengerekhodi nelangatye nekudodobalisa. Amazwe athile imigangatho ezahlukeneyo malunga nelangatye retardancy.
UK: BS 5867-2: test LINGATSHA ngokuba Fabrics for amakhethini lokuzenzela
Eli laphu lihlolwe phambi nasemva zokucoca.
Isampulu Ilaphu ibekwe ngokuthe nkqo kwi ifreyim yesinyithi. Le ifreyim yesinyithi kufuneka amagosa amakishayo ezimbini yokulinganisa. Ilangatye lisetyenziswe kumphezulu ngelaphu ukuze imizuzwana 10.
Iziphumo: Ilaphu udlula kulo mgangatho responce ukuba:
1) .Le isiphawuli yokuqala akukho yahlukana yi edangatyeni;
2) .Le nelangatye akabi kuze kungqameko ifreyim yesinyithi.
Eli laphu lihlolwe phambi nasemva nokucoca ( 12 Imijikelo ye BS EN ISO 10528 INkqubo Ukuhlamba Standard 75 ° C kwaye ngoko umgca loma).
Isampulu Ilaphu ibekwe ngokuthe nkqo kwi ifreyim yesinyithi. Ilangatye lisetyenziswe kumphezulu ngelaphu ukuze imizuzwana 15.
1) .Le nelangatye akabi kuze kungqameko ifreyim yesinyithi;
2) .Akukho zamathontsana otshisayo.
Uhlobo C (standard ephezulu):
Eli laphu lihlolwe phambi nasemva zokucoca. ( 50 Imijikelo ye BS EN ISO 10528 INkqubo Ukuhlamba Standard 75 ° C ne abile ngoko uze noomatshini yomile.)
Isampulu Ilaphu ibekwe ngokuthe nkqo kwi ifreyim yesinyithi. Ilangatye lisetyenziswe kumphezulu ngelaphu ukuze imizuzwana 5, imizuzwana 15, imizuzwana 20 nemizuzwana-30.
1) .I emva lidangatye kunye afterglow musa ukudlula imizuzwana 2.5;
2) .Le nelangatye akabi kuze kungqameko ifreyim yesinyithi;
3) .Akukho zamathontsana otshisayo.
LONGWAY Flame umkhusane nekudodobalisa Ilaphu iyahambisana BS5867-2 Type C iimfuno.
NFPA (US National Fire Protection Association) iye imigangatho ezahlukeneyo kuxhomekeke iza kusetyenziswa ngayo eli laphu. Kwimeko draperies, amalengalenga, namalaphu efanayo ejingayo, umgangatho esebenzayo i NFPA 701 : Standard Iindlela iimvavanyo mlilo ngenxa Flame andise Impahla elukilweyo Films.
NFPA 701 Uvavanyo Indlela One (ifanele amalaphu ngaphantsi kwe 700gsm okanye 21oz / eyadini square ): iisampulu zibethwa ekuqaliseni nelangatye imizuzwana 45. Kwathi NFPA 701 Uvavanyo Indlela One,
1) .I avareji ubunzima ukulahleka le imizekelo iya kuba-40% okanye ngaphantsi yaye
2) .Fragments iintsalela leesampulu eziwela kwigumbi lovavanyo akayi kuqhubeka aqhumisele ngaphezu kwemizuzwana 2.
NFPA 701 Uvavanyo Indlela ababini (ifanele amalaphu over700gsm okanye 21oz / isikwere eyadini ): idangatye lisetyenziswa ngezantsi komphetho emazantsi sihlahla imizuzu emibini emva koko sirhoxiswe. Kwathi NFPA 701 Uvavanyo Indlela Two,
1) .Naziphina yomzekelo kufuneka kuqhubeka odangazelayo imizuzwana engaphezu kwama-2 emva kokuba uvavanyo licimile revmove adibane nabanye ndlovu;
2) .Le ubude egaya naziphi ndlovu elinye caba mayingabi ngaphezu 435mm (17.1 in); ngokuba siphindwe ndlovu 1050mm (43.1 in);
3) .Naziphina iinxenye okanye iintsalela leesampulu esiwa floorof izixhobo uvavanyo kufuneka kuqhubeka ukukutshisela imizuzwana engaphezu kwama-2 emva kokuba emgangathweni.
Ukucoca Namanzi ukuhluzeka kuloko Iinkqubo : Xa umenzi ubanga ukuba laphu igcina ukuxhathisa yayo idangatye emva ukucoca okanye imo yezulu, baya kuvavanywa izinto emva kokuba iye phantsi kweemeko exposure eza kusebenza kusetyenziso ojoliswe, ukucoca owomileyo (3 imijikelo) , ukuqola (5 imijikelo) okanye enye ukungakhuseleki kwi amanzi (ukuntywiliselwa ngokupheleleyo ngesitya equlethe amanzi etephini bushushu iiyure hayi ngaphantsi kwe-72).
Ngaphandle imigangatho UK kunye USA ngasentla, kukho ezinye nemigangatho ezahlukeneyo countries.In Yurophu Australia, imigangatho ezininzi amukela kushishino unguye isiFrentshi, isiJamani kunye nemigangatho British. Kutshanje, nayo i- European EN 13773 umlinganiselo ukuba kwamalengalenga uya kuya kuxhaphaka kakhulu.
France: Freedom 92-503
ixesha Post: Sep-17-2018
Lwedilesi: No.999 Xugongqiao Rd, Kunshan Huaqiao, Jiangsu kwiPhondo, China.
Amalaphu ezisetyenziswa ezininzi izithuba zikarhulumente (kubandakanya izibhedlele, kumakhaya abantu abalupheleyo, izikolo, iicawe, audi ...
Iintlobo ezahlukileyo Flame Retardancy
Zidumbu amakhethini Hospital kufuneka ukuba ube nekudodobalisa idangatya (aka nekudodobalisa umlilo okanye mfutshane njenge ...